| 2021 Sep 12 | 07:45 am	181
सिरहा, भदाै २७ः जिल्लाको माडर सीमानाकाको ढाट खोलिदिन आफन्तले गरेको बिन्ती सशस्त्र प्रहरीले बेवास्ता गर्दा एक बिरामीले अस्पताल पुग्न नपाउँदै प्राण त्यागेकी छन्। सिरहा नगरपालिका–४ रमौलकी ४० वर्षीया वहिदा खातुनले उपचार अभावमा सीमामै छटपटाएर प्राण त्यागेकी हुन्।
आलमले प्रश्न गरे, ‘बिरामीलाई रोक्ने तर तस्करलाई खुला गर्ने यो कस्तो नियम हो ? सीमाभित्र समेत जान रोक्दा बिरामी छटपटाएर प्राण त्याग्नुपर्ने कस्तो देश हो यो ?’ त्यो कालो रातले आफूहरूलाई देशको शासन र प्रशासनको हविगत बुझ्ने अवसर जुराइदिएको आलमले बताए। ‘प्रशासन पीडितमैत्री होइन, लेनदेनमैत्री भएको प्रस्टै देख्न पायौं। सीमामा दर्दले छटपटाइरहेकी मेरो दिदीको पीडासँग सरोकारै नराख्ने तर तस्कर र व्यापारीलाई स्वागतसहित भित्र छिराउँदै गरेको दृश्य मेरो मानसपटलबाट कहिल्यै मेटिँदैन,’ उनले भने।
बोर्डर आउट पोस्ट माडरका सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक लोकनाथ उप्रेतीका अनुसार बिरामी पक्षले ड्युटीमा तैनाथ सशस्त्र प्रहरीलाई ढाट खुलाइदिन आग्रह गरेको सत्य हो। तर बारम्बार आग्रह नगर्दा ढाट नखुलेको उनले बताए। ‘तर उहाँहरू एकचोटि मात्र आग्रह गरेर यताउता हिँड्डुल गर्न थाल्नुभयो,’ उप्रेतीले भने, ‘बारम्बार आग्रह गरेको भए ड्युटी इन्चार्जले ढाट खुलाइदिनुहुन्थ्यो कि !’ माडर भन्सारका प्रमुख जगदीशकुमार पुर्वेका अनुसार यस नाकाबाट मालवाहक सवारी जति बेला पनि आउन पाउँछ। ‘तर, बिरामीको हकमा हामीले अनुमति दिएपछि मात्र ढाट खुल्छ,’ उनले भने, ‘मलाई त बिरामीको मृत्यु भएपछि मात्र थाहा भयो। राति हाम्रो कर्मचारी ड्युटीमा हुँदैन, सुतेका हुन्छन्। उनलाई जगाउनुपर्छ अनि मात्र ढाट खोल्छन्।’ कर्मचारीलाई कोही जगाउनै नआएको पनि उनले बताए।
बिरामीलाई रोकेर तस्करलाई छिराएको दृश्य देखियो नि ! जिज्ञासामा पुर्वेले भने, ‘मालसामान त जति बेला पनि आइहाल्छ नि। राति पारिबाट ल्याइने मालसामान भन्सारभित्रै आएको होला। जुन शैलीमा पारिबाट मालसामान भित्र्याइएको भिडियोमा देखिएको छ, यो त गलत हो।’ माडरका स्थानीयका अनुसार यस नाकाबाट मालसामान बोकेको मोटरसाइकल माडर बजारस्थित तस्करको गोदाममा पुग्छ। बुधबार राति बिरामीका आफन्तले भिडियो नखिचेको भए मालसामान बोकेर पारिबाट माडर भन्सार नाकाबाट छिरेको मोटरसाइकल पनि तस्करका गोदाममा पुग्थ्यो,’ उनले भने। सिरहाका सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक दीपेन्द्र गिरीका अनुसार सीमामा बिरामीको आउजाउलाई सहजीकरण गर्ने स्पष्ट निर्देशनलाई बेवास्ता गर्नेउपर कारबाही हुने आश्वासन दिए। यो घटनाले सशस्त्र प्रहरी, प्रशासन प्रमुख र भन्सार प्रमुखलाई मात्र नभई गृह प्रशासनलाई समेत गिज्याएको छ। नागरिक दैनिकबाट